Waxaan kasoo jeeday qoys dan yar ah sidaa darteed waxaan xaq u lahaa cunti bilaash ah inaan iskoolka ka cuno. Gabdhaha ka shaqeeyo maqaayadda iskoolka way i wada yaqaanneen sidaa darteed markuu safku isoo gaaro xigtayda ayay i jillaabi jireen wax kalana ima waydiin jirin. Subax ayaa waxaa timid maqaayaddi gabar cusub oo aan war u hayn xaaladdayda.
Marki aan cuntada qaado is iri ayay tiri keen doolar iyo rubuc. Indhaha ayaan cirka u taagay, geesaha iyo gadaal ayaan fiiriyay mise canug walba doolar ayuu gacanta ku haystaa. Waabaa igu baryay waana baraarugay. Waxay noqotay inaan xaaaladayda sharraxo sidaasna anoo ceebaysan quraacdi la igu siiyo.
Maalintaas wixii ka danbeeyay waxaan billaabay inaan u fiirsado caruurta dharka ay qabaan, qabaha ay xiran yihiin, buugaagta iyo qalimaanta ay sitaan. Waxaa isoo baxday inay ka wada duwan yihiin. Waxaan noqday qof si kala ah. Waxaan dareemay hoosayn. Waxaan billaabay inaan caruurta kale iska aruuriyo ilaa aan gooni u baxay, sheegadi iyo hadalkina iska daayay.
Subaxa uu Keith cudurkaas ku dhacay iyo subixii ka horreeyay reerkoodu isku jeeb ayuu ahaa. Is baddalka dhacay ayaa ah kaliya inuu dareemay hadda inuu sabool yahay halka shalay uusan taas dareensanayn.
Dareenka faqiirnimadu kuma dhamaado intaas kaliya ee wuxuu qofka ku riixaa wax yaabo aan habboonayn. Qofku markuu aamino inuu sabool yahay wuxuu u bareeraa qataro badan. Waxbo kama naxo waxna uma aabo yeelo. Tusaale, suuragalnimada in qof ku guulaysto khamaarka loo yaqaan Powerball ee Maraykanka laga cayaaro waa hal qof sadexdii boqol oo milyanba (one in three hundred million). Saas oo tahay wax yar mooyee waxaa iibsado waa dan yarta.
Cilmi-baaris Kanada lagu sameeyay ayaa sidaas oo kale tustay. Baarayaasha ayaa marki hore su'aalo badan oo dakhliga ka qayb galayaasha ku saabsan waydiiyay. Ka dib, waxay ku yiraahdeen ka qayb-galayaashi, qof kasta liiskaan meesha uu kaga jiro ha isaga qoro. Liisku waa mid bug ah oo ay baarayaashu sameeyeen. Wuxuu tusayaa mushaaraadka dadka isku deegaanka iyo isku xirafadda ah iyo sida ay u kala korreyaan.
Laakiin ka qayb-galayaasha run ayaa looga dhigay. Qof kasta isagoo ku jaangoonayo waxa soo galo ayuu liiska isku qoray. Ka dib, waxaa loo qaybiyay labaatan labaatan doolar. Waxaa lagu yiri saad doontaa ka yeela. Kuwii liiska ka galay meel kore oo dareemay inay xoogaa dadka kale xoolo dheer yihiin labaatanki jeebka ayay ku riteen. Kuwii dareemay inay dadka ugu jeeb hooseeyaan labaatanki mid khamar ku cayaaro iyo mid si kale u dubto ayay noqdeen oo midna meeshi lama dhaafin. Sababtu way iska caddahay. Faqiirku wuxuu is yiri labaatan kaligeed gaajo kaa saari maysee iska jajabso, halka midka kale uu is yiri meel ku habboon u isticmaal.
Waxaa laga yaabaa in aad is tiraahdo arrintaan waa mid ku dhisan dhaqamada Galbeedka innagana nama qusayso oo fuqaradeennu waxaas kuma kacaan. Mar kale aan ku xasuusiyee waxa laga hadlayo maahan faqiir ee waa midka dareemo inuu faqiir yahay iyo sida uu u dhaqmo inta badan. Intaas adigoo maanka ku hayo, xasuuso oraahdi ilaa waa dhow dhagaheennu maqlayeen ee ahayd "maxaan ka dhimanayaa".
Inta aan maqal ama ilowday haddii aan u sharraxo, oraahdaan waxay ahayd mid ay isticmaali jireen mooryaanti isbaarooyinka koonfurta Soomaaliya u yeelleen. Marki uu is adkeeyo qofka wax laga rabo ayay ku dhihi jireen, anigu inaan dhinto ma kala jecli waayo wax aan haysto oo aan isagu adkeeyo adduunkaan ma yaalaan, mark adigu haddaad haysato wax aad ka naxayso oo aad rabto inaadan ka dhiman is furo haddii kale aan isla dhimanno.
Halkaas waxaa kaaga muuqato in mooryaantu qatartaas u qaadanayaan kaliya inay dareemeen inay sabool yihiin. Arrintaas kuma koobna mooryaanta ee waa mid ku baahsan bulshada dareento saboonimada. Xasuuso gabaygii AUN Dhoodaan ee ahaa "Naftu inay maqnaatiyo inay mahad ku noolaato, Maaweelis weeyaan haddii aad mid u dhaxaysaaye". Halkaan wuxuu gabyaagu cabbirayaa in qatar badan la qaato si looga baxo saboolnimada.
Sidoo kale, erayada aadka ay u isticmaalaan dadka tahriibo iyo kuwa dukaamada ka furto meelaha qataraha badan ee inta badan soomaalida lagu laayo ayaa ah "duruuf ayaa nagu kaliftay iyo sidaan ayaan dhaanto sidaan ku noolayn". Dadkaan isku jeeb ma wada aha laakiin waxay ka siman yihiin dareenka saboolnimada.
Yaa faqiir ah, maxaa keenayo is qofku dareemo inuu sabool yahay, caddad intee la eg ayaase looga baxaa saboolnimada? Ha ka hordhicin qaybta xiga Eebe idinkii
Maxaa Sabab u ah Isbaddalka Ka Socdo Itoobiya
By Ibrahim Aden Shire June 21, 2018
Siduu u yimid raysulwasaare Abiy, dalka Itoobiya waxaa ka socdo isbaddaal xawaare dheereeyo ku socdo. Isbaddalka uu wado mudane Abiy waxaa ka mid ah kuwo aanan la filayn saamayn weyna ku yeelan karo guud ahaan Geeska Afrika. Tusaale, go'aanka uu ka qaatay qadiyadda Baadhame oo ay Eritareeya isku hayeen. Haddaba maxaa keenay isbaddalkaan dad badan ula muuqdo qar iska-tuur qaarna ula muuqdo mid aad loogu baahi qabay?
Labo arrimood ayaa sabab u ah isbaddalka mudane Abiy: Culaysyo siyaasadeed oo gudaha ah iyo mid dhaqaale oo soo foodsaaray.
Mudane Abiy wuxuu ka dhashay qowmiyadda Oromada oo ah tiro ahaan kuwa ugu badan dalka Itoobiya laakiin waligood aan hanan hoggaanka dalkaas. In la doorto waxaa keenay kacdoonno waaweyn oo uu qabiilkiisu sameeyay kuna dalbanayeen xuquuq siyaasadeed iyo mid xorriyad. Imaanshaha mudane Abiy waxay ahayd guul usoo hoyatay Oromo iyo musiibo u billaabatay Tikre iyo kuwa saaxiibka la ah.
Tikre oo hastay xukunka muddo 30 sano ku dhow, waqt…
Maxaa Sabab u ah Hijrada Dhalinyarada Gobalka Gedo Sideese lagu xallin karaa?
By Ibrahim Aden Shire May 04, 2018
Qormadaan tii ka horraysay waxaan ku tilmaamay in dhibka ugu weyn ee dhalinyarada gobalka Gedo qayb ooga noqon la'dahay noocyada kala duwan ee horumarka inay tahay hijrada ay dhalintu ka hijroonayso dhammaan deegaannada gobalku ka kooban yahay. Haddaba maxaa sabab u ah hijradaan maxaase xal u ah?
Dadki faallooyinka fakerkooda ku dhiibtay iyo qaar farriimo gaar ah isoo dirayba waxay xuseen dhowr arrimood oo ay yiraahdeen ilaa xal loo helo hijradu dhammaan mayso. Saddex arrimood oo loogu badnaa ayaan halkaan kaga faalloon doonaa iyo hal kale oo qof kaliya uu isoo diray laakiin macquul iila muuqatay. Saddexda arrimood ayaa kala ah: Ammaan la'aan, jaamacad la'aan iyo fursad shaqo la'aan.
Gobalka Gedo wuxuu ka mid yahay meelaha ugu ammaanka xun guud ahaan dalka Soomaaliya. Dagmooyinkiisa intooda badan way adag tahay in gaari loogu kala safro cabsi la'aan. Dagmooyin dhowr ah gudahooda joogitaankiisa ayaaba halis ah. Sidaa darteed dood kama taagno in am…
Bolooggaan oo Maanta Gu jirsaday. Sidee ku billaabay Maxaanse faaiiday?
By Ibrahim Aden Shire July 28, 2018
Hal sano ayaa kasoo wareegtay maalinti aan billabay inaan boggaan wax ku qoro. Aroorti 28 July 2017'ki kuma soo toosin inaan boloog billaabo. Iskaba daa inaan billaabee maba aqoon inaan heli karo mid bilaash oo diyaarsan hal dhufasho kaliyana ay iga xigto inaan arigtayda saaxiibayday kula wadaago.
Sababti ma xaussuto laakiin goor galin danbe ah ayaan is maqalnay Isxaaq Cabdullahi Climi-Sahal oo asxaabta ka mid ah. Sheeko ka dib wuxuu igu yiri qoraallada aad soo dhigto Facebook-ga waa fiicanyihiin laakiin waxaa kasii fiicnaan laahyd inaad boloog kusoo qorto si ay u noqdaan kuwo rasmi ah oo laga faaiidi karo. Markaan muujiyay inay igu adag tahay samynta bog iyo gacan ku hayntiisa ayuu ii sheegay inuu jiro mid iigu diyaarsan akoontiga aan ku leeyahay google-ka. Saacad ka dib markan jaray telkiisi ayaan soo dhigay midki ugu horreeyay aan ku tijaabiayay.
Walow aannan isu soo wicin wadatashi, hadalkeenni wuxuu ku dhamaaday talo i anfacday abaal weyna aan uga hayo lagana yabo inaan waliga…
By Ibrahim Aden Shire May 02, 2018
Ayaanle Macalin Cabbeey oo ka mid ah dhalinyada firfircoon ee gobalka Gedo ayaa isoo diray farrintaan su'aasha ah ee hoos ku oqran:
Ka Qaybgalka Shirka Seddex Geesoodka ah ee Casmara dowladdu ma ku saxantahay?
By Ibrahim Aden Shire September 06, 2018
Shir u dhexeeyo dalalka Soomaaliya, Eritareeya iyo Itoobiya ayaa ka furmay magaalada Casmara ee Eritareeya. Shirkaan waxaa ku kulmaya seddexda qof ee ugu sarreeyso dalalka ay matalayaan. Dhinaca Soomaalida waxaa durbadiiba bilowday dhaliil iyo cabsi laga qabo in dalkeennu ku dhaco halis qarsoon oo meelo fog laga soo maleegay. Haddaba aniga oo ka duulayo dareenka shacabka ila midka ah ayaan jeclaystay inaan qormo gaaban ku cabbiro sida aan u arko kulankaas iyo waxa laga filan karo.
Marka hore aan qiro inaan ku jiro dadka aaminsan in Itoobiya ay tahay guumayste. Dal ku caan baxay guumaystenimo wuxuu la mid yahay ruux tuugnimo ku caanbaxay. Si walba oo uu wanaag muujiyo oogta waarina safka hore masaajidka aad ugu aragtid, mar walba oo aad aragto ruuxa aad qaadqaad ku taqaannay waxaad qabtaa tuhun ah inuu xatooyo maaggan yahay ishana waxaad la raaci dhinaca uu safka ka galo. Si la mid ah, wanaag walba oo uu guumayste muujiyo, marnaba tuhun ah inuu khiyaano iyo shirqool maleegayo meesha l…